Tag: pejy haingam-pandeha » Martech Zone
Fotoana famakiana: 6 minitra Ny ankamaroan'ny tranonkala dia very eo amin'ny antsasaky ny mpitsidika azy ireo noho ny hafainganan'ny pejy. Raha ny marina dia 42% ny salan'isan'ny tsimok'aretina biraon'ny birao finday, 58% ny salan'isan'ny pejin'ny pejy finday eo anelanelan'ny 60 ka hatramin'ny 90%. Tsy fandokafana isa amin'ny fomba hafa, indrindra ny fandinihana ny fampiasana finday dia mitombo ary mihasarotra isan'andro ny manintona sy mitazona ny sain'ny mpanjifa. Araka ny Google, ny
Fotoana famakiana: 3 minitra Nanoratra kely ihany izahay momba ireo fiatraikany izay misy fiatraikany amin'ny fahafahan'ny tranonkalanao mitondra entana haingana ary mizara ny fomba haingana kokoa mandratra ny orinasanao. Tena gaga aho amin'ny isan'ny mpanjifa mifampidinika aminay izay mandany fotoana sy hery be amin'ny paikady marketing sy fampiroboroboana votoaty - mandritra ny famindrana azy ireo amin'ny mpampiantrano tsy manara-penitra miaraka amina tranonkala iray izay tsy noheverina ho mavesatra haingana. Manohy manara-maso ny hafainganam-pandehan'ny tranonkalantsika manokana izahay ary
Fotoana famakiana: 3 minitra Niara-niasa tamin'ny fivarotana vitamina sy famenon-tsakafo an-tserasera izahay mba hanampiana amin'ny fampitomboana ny fahitana azy ireo sy ny tahan'ny fiovam-po. Nandany fotoana sy enta-mavesatra be ny fifamofoana, saingy efa manomboka miseho ny valiny. Ny tranonkala dia mila refy ary havaozina hatrany ambony. Na dia tranokala niasa tanteraka teo aloha aza izy io dia tsy nanana singa ilaina loatra hananganana fahatokisana sy hanamorana ny fiovam-po